Ubuninzi bezityalo zeRabies zokukhusela China Manufacturer
Iimpembelelo ezimbi,Iimpendulo zengingqi okanye eziSicwangcisekileyo,Unokukhutshwa ngokukhawuleza
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: Iimpembelelo ezimbi,Iimpendulo zengingqi okanye eziSicwangcisekileyo,Unokukhutshwa ngokukhawuleza
Home > Imveliso > I-Rabies Vaccine Usetyenziso lwabantu > Bulk Final > Ubuninzi bezityalo zeRabies zokukhusela
Ubuninzi bezityalo zeRabies zokukhusela
 Ubuninzi bezityalo zeRabies zokukhusela
Ngaphandle kokugonya abantu, enye indlela yaveliswa ngokugonywa izinja ukukhusela ukusasazeka kwegciwane. Ngowe-1979 iVan Houweling Research Laboratory ye- Silliman University Medical Centre eDumaguete ePhilippines ,  yavelisa kwaye yakhiqiza igciwane lokugonywa kweenja elalinika iminyaka emithathu yokukhuseleka kwi- rabies . Ukuphuhliswa kwesigonyi kuholele ekupheliseni i-rabies kwiindawo ezininzi zeVisayas naseMindanao Islands. Inkqubo ephumelelayo ePhilippines yasetyenziselwa njengomzekelo ngamanye amazwe, njenge- Ecuador kunye neYucatan State of Mexico , ekulwa kwabo ngokulwa neerbi eqhutywe ngokubambisana neWorld Health Organization . 
E- Tunisia iprogram yokulawula i-rabies yaqaliswa ukunika abanikazi beenja ithuba lokunyanga lokunyanga lokuxilongo oluxhaswe nguRhulumente wabo. I-vaccine iyaziwa ngokuba yiRabisin ( Mérial ), okuyi-vaccine elalisekelwe kwi- cell esebenzisa i-rabies kuphela. Izigulane zihlala zilawulwa xa abanikazi bathatha inja zabo ukuze bahlolisise kunye nokutyelela kwi-vet.
Uluhlu lweMveliso ezinxulumene noko: Iimpembelelo ezimbi , Iimpendulo zengingqi okanye eziSicwangcisekileyo , Unokukhutshwa ngokukhawuleza , Izimpembelelo ezincinci , Iimveliso ezigqityiweyo , Iimveliso zeMpilo zeMpilo , Iimveliso zeeMveliso zeMpilo , I-Gelatin Iimveliso zeeMveliso eziVimbelayo